Umshushisi omkhulu ecaleni lokusoconga inkosikazi | Ilanga News
Home Izindaba Umshushisi omkhulu ecaleni lokusoconga inkosikazi
lzinkabi zishaywe wunembeza zagonyuluka lonke iqiniso enkosikazini
LILAHLWE ngelakubo isekela lomqondisi weNational Prosecuting Authority (NPA), KwaZulu-Natal, elikhalelwe ngamasongo kaSigonyela ngoMsombuluko
ngezinsolo zokwakha itulo lokubulala inkosikazi yalo eyimantshi, okubikwa ukuthi liyithengele izinkabi ngo-R50 000 ukuba ziyingqokoze ikhanda.
Ngokuthola kweLANGA ngemi-thombo yalo esidonse ngendlebe ukuthi singayidaluli, ithi u-Adv Mbakaza ufonele owesilisa ngenombolo yakhe yasemsebenzini – ILANGA elinalo igama lakhe, kodwa eliligodlile, wacela ukuba bahlangane naye ngakwaSpar oseGlenwood, eThekwini phakathi noNdasa (March), kunodaba olubalulekile afuna baluxoxe.
Kuthiwa ufike kulona wesilisa wamtshela ukuthi unomsebenzi omkhulu afuna amenzele wona wokubulala inkosikazi yakhe, wamthembisa ukumkhokhela u-R50 000 uma emenzele kahle wona. Umthombo uthi umsolwa uphinde wafonela lona wesilisa emcela ukuba babonane ukuyoqedela umsebenzi abebexoxe ngawo.
Kuthiwa ufike esephethe isithombe senkosikazi nekheli lomuzi wabo ose-Eastern Cape, lapho umsocongi abezoyithola khona uma eseyoyibulala. Umnike u-R1 700 wokuba agibele amatekisi abheke e-Eastern Cape, wamthembisa ukuthi imali yonke esele uzoyithola uma esebuya ukuyokwenza umsebenzi.
U-Adv Kombisa Mbakazi ungaphandle ngebheyili ka-R2 000 ngokwakha itulo lokubulala uNkk NC Mbakaza – angatholakalanga amagama akhe aphelele –
oyimantshi eBisho, e-Eastern Cape.
Kuthiwa ngesikhathi sebehla-ngana okwesibili nenkabi, ibisiha-mba nesihlobo sayo ebizokwenza naso lo msebenzi. Ngesikhathi sebeya e-Eastern Cape bese behamba bobabili.
Kuthiwa izinkabi zishaywe wunembeza sezifikile emzini kaNkk Mbakaza e-Eastern Cape, zalihlanza lonke iqiniso. Zikhiphe isithombe sakhe ezisinikwe ngu-Adv Mbakaza – ukuze zingeke zenze iphutha zidubule umuntu okungesiyena – zamkhombisa.
Kuthiwa uNkk Mbakaza akaba-nge esananaza, ushayele amapho-yisa ngaleso sikhathi ewabikela ngalolu daba, emuva kwalokho wayovula icala.
Umthombo waleli phephandaba uveze ukuthi laba abashadile bebehlala ngokwehlukana ngenxa yomsebenzi, indoda isebenzela eThekwini igoduka uma kuphele inyanga.
Umthombo uveze ukuthi laba sebenesikhathi beshadile kanti banomuzi nezingane e-Eastern Cape. Uqhuba uthi u-Adv Mbakaza nomkakhe bebebhuqana, kubukeka sengathi konke kuhamba kahle emshadweni wabo.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele, usiqinisekisile lesi siga-meko wathi umsolwa zimkhalele ngemuva kokuba izinkabi abezi-qashile zimjikelile, zatshela inkosikazi lonke iqiniso.
Uthi ngemuva kokuvulwa kwecala, amaphoyisa abe esebopha umsolwa ngoMsombuluko waphuma ngebheyili ka-R2 000 eNkantolo yeMantshi yaseThekwini, icala lakhe lihlehlele ukuthi liphinde libuyele enkantolo ngoNcwaba (August).
Previous articleUphumela obala umdlali oyamaniswa neChiefs
Next articleZimshaqisile izinsongo